အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှု - ပျမ်းမျှလား၊ (2017) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
စမ်းသပ်စိတ်ပညာအဘို့ဓာတ်ခွဲခန်း, ဘဲဂရိတ်, ဆားဘီးယားတက္ကသိုလ်
keywords: အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်, WHR, တင်ပါး, ရင်သား, ဆွဲဆောင်မှု, ပျမ်းမျှအား, supernormal, ကျား, မ, ဒေသခံဂလိုဘယ်
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ဆွဲဆောင်မှု၏နှစ်ခုယူဆချက်နှိုငျးယှဉျဖို့ပဲ။ ပထမဦးဆုံးက "preference ကို-for-ပျှမ်းမျှ" ယူဆချက်ဖြစ်ပါသည်: အရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုအမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ပေးထားသောလူဦးရေ  များအတွက်ပျမ်းမျှခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုကိုယ်စားပြုသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒုတိယက "preference ကို-for-supernormal" ယူဆချက်ဖြစ်ပါသည်: ဒါခေါ် "အထွတ်အထိပ်ပြောင်းကုန်ပြီအကျိုးသက်ရောက်မှု" အတိုငျး, ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ပျမ်းမျှ  ထက်ပိုဣတ္ဖြစ်ပါတယ်။ တင်ပါးဆုံရိုးအချိုး (WHR), တင်ပါးနှင့်ရင်သားခါး: ကျနော်တို့သုံးအမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများများအတွက် preference ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ နှစ်ဦးစလုံးလိင်၏ 456 သင်တန်းသားများရှိခဲ့သည်။ (WHR, တင်ပါးနှင့်ရင်သား) ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်ကွန်ပျူတာကာတွန်း (DAZ 3D) လှုံ့ဆော်မှုသုံးစုံဘို့ program တစ်ခုကိုသုံးနိုင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအစုံအမြင့်ဆုံးဣတ္အဆင့်နိမ့်ဆုံးကနေအဆင့်ခြောက်လလှုံ့ဆော်မှုပါဝင်သည်။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး (တာဝန် 1) တွေ့ပျှမ်းမျှ (တာဝန် 2) အရာတစျခုစီထားအတွင်း၌လှုံ့ဆော်မှုကိုရှေးခယျြဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ အခြားအုပ်စုတစ်စုဒေသခံအခြေအနေ (သာအထီးကျန်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ) အတွက်လှုံ့ဆော်မှုစစ်ကြောစီရင်နေစဉ်ပါဝင်သူများထဲမှတစ်ဦးအုပ်စုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေအနေ (တကိုယ်လုံး) တွင်ပေးအပ်ခဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုအုပ်စိုး၏။
သုံးကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အကှဲလှဲတဲ့သုံးလမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (တာဝန်, အခြေအနေတွင်နှင့်ကျား, မအချက်များ) ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ WHR: အလုပ်တခုကို၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်ဆွဲဆောင်မှု WHR ပျမ်းမျှတဦးတည်းထက်သေးငယ် (အသေးစိတ်ဣတ်) ကြောင်းကိုညွှန်ပြ, F1,452 = 189.50, p = .01 ရယူခဲ့ပါတယ်။ စကားစပ်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုသိသာကြီး F1,452 = 165.43, p = .001, တင်ပါး .. WHR ဒေသခံအခြေအနေတွင်ထက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွက် (ပိုဣတ္) သေးငယ်ကြောင်းညွှန်ပြ: အလုပ်တခုကို၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုသိသာကြီး F1,452 = 99.18, ဆွဲဆောင်မှုတင်ပါးပျမ်းမျှသူတွေကိုထက်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ p = .001 ။ ရင်သား: အလုပ်တခုကို၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုသိသာကြီး F1,452 = 247.89, p = .001, ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးရင်သားပျမ်းမျှသူတွေကိုထက်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ ကျား, မ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်ယောက်ျားအမျိုးသမီးထက်သိသိသာသာပိုကြီးတဲ့ရင်သားကို ရွေးချယ်. ကြောင်းညွှန်ပြ, F1,452 = 16.39, p = .001 သိသာခဲ့ပါတယ်။ စကားစပ်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်ရွေးကောက်တော်မူသောသားမြတ်အရွယ်အစားဒေသခံအခြေအနေတွင်ထက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွက်ပိုမိုကြီးမားခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ, F1,452 = 53.89, p = .001 သိသာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တာဝန်×အဆိုပါအပြန်အလှန်ကျား p = .1,452, F25.00 = 001, သိသာခဲ့ပါတယ်။ Post ကို hoc စမ်းသပ်မှု (Scheffé) အမျိုးသမီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, ယောက်ျားနှစ်ဦးစလုံးအခင်းအကျင်းထဲမှာရှိသကဲ့သို့ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးပိုကြီးတဲ့ရင်သားကို ရွေးချယ်. , ထိုပြသခဲ့ကြသည်။
တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်ဤတွေ့ရှိချက် preference ကို-for-supernormal ယူဆချက်ကိုထောကျပံ့: အဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး WHR, တင်ပါးနှင့်ရင်သားနှစ်ဦးစလုံးလိင်အဘို့နှင့်နှစ်ဦးစလုံးတင်ဆက်မှုအခြေအနေများအတွက်ပျမ်းမျှသူတွေကိုထက်ပိုဣတ္ဖြစ်ကြသည်။
1 ။ Singh ကဃ (1993) ။ အမျိုးသမီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု၏အလိုက်အရေးပါမှု: ခါး-to-တင်ပါးအချိုး၏အခန်းက္ပ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 65: 293-307 ။
2 ။ Ramachandran VC ကို, Hirstein ဒဗလျူ (1999) ။ အနုပညာသိပ္ပံ: သဗေဒအတှေ့အကွုံတစ်ဦးကအာရုံကြောသီအိုရီ။ သိစိတ်ကိုလေ့လာရေးဂျာနယ်, 6: 15-51 ။